Waraka Sheegaya in Puntland ay Dad Somalida Ogadeeniya u Dhashay ay Dhiibtay – Rasaasa News
Oct 29, 2009 Jwxo-shiil, Puntland
Waxaa baryahanba socday hadalo ay dadku isla dhexmarayaan oo sheegaya in dad dhalasho ahaan ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, laga qabtay Puntland ka dibna loo dhiibay Itobiya, arintaas oo aad uga cadhaysiisay dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Arintu sida la sheegayo waa arin dhab ah, laakiin ma aha sida loo sheegayo. Waxaa xabsiyada dalka Yeman ka buuxa dad Somaliyeed oo qaxooti ah, dadkaas oo doonyo ku soo gala dalka Yeman, qaar badan oo dadkaas ka mid ah waxay ku dhintaan badaha.
Dad aad u badan oo dhalinyaro Somaliyeed ah ayey safaarada Somaliya ee Yeman ka soo daysay xabsiyada Yeman, waxayna safaaradu u soo samaysay waraaq dhoof oo ay ku yimaadaan dalka Somaliya. Dadkaas waxaa ka mid ahaa dhalinyaro ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, dadku kolkii ay soo gaadheen magaalada Boosaaso waa la kala shaandheeyey maadaama ayna Somaliya dawlad dhexe ka jirin gabal waliba waxaa uu gooni u ilaashadaa arimahiisa amaanka. Dhalinyarada ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya waxay sheegteen in ay u socdaan kana soo jeedaan dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaana khasab noqotay in wakiilada Itobiya u jooga Puntland loo dhiibo si ay ugu sameeyaan warqado ay ku galaan dhulka Somalida Ogadeeniya. Arintii waxay isu badashay baadhid, waxayna wakiilada Itobiya uga shakiyeen dhaliyarada in ay xidhiidh la leeyihiin Jabhadaha.
Waxaa dhab ah oo aan cidna ka qarsoonayn in dalka Somaliya uu gacanta ugu jiro dawlada Itobiya, wax alaale wixii ay doontana ka samayso, waxay had iyo goor xidhxidhaa muwaadiniinta gabalada Somaliyeed, waxaa kale oo ay ku joogtaa dalka Somaliya ciidan ahaan, siyaasiyiin iyo hay,ad kasta oo Itobiya oo ka fushata dalka Somaliya waxa ay doonto.
Puntalan waxaa ay ka mid ahaan jirtay, oo ay hadana tahay, ahaana doonta gabalada Somaliyeed ee ay dadka soo jeeda dhulka somalida Ogadeeniya ugu noolaan karaan ugana shaqaysan karaan si kalsooni ah oo ayna ugu noolaan karin gabalada Somaliyeed ee kale, mahadaas waxaa iska leh dadweynaha gabalada Puntland oo iyagu kalgacal joogta ah u haya dadweynaha ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxay si xoog leh u degan yihiin gabalada Puntland iyaga oo ka shaqaysta, ulana siman shaqooyinka muwaadiniinta reer Puntland. Hadii ay awood lahaan lahayd Puntland marna ma ayan dhacdeen in ay dhacaan shilal ka dhacay gudaha Puntland.
Hadaba, waxaa jira dad si xun uga faa,iidaysanay arimaha sida khaladan u dhaca had iyo goor, kuwaas oo aan u danaynaynin dadweynaha Somalida Ogadeeniya, balse iska dhigaya in ay u danaynayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Dadka arimahan sida xun uga faa,iidaysanaya waxaa ugu horeeya Jwxo-shiil, oo ah ninka ugu horeeya ee wada dhibaata Somalida Ogadeeniya sababhan soo socda awdood; siyaasad xumo, xukun jacayl, cadownimo iyo dhibaato u abuurid ummada Somalida Ogadeeniya.
Hadaba, anaga oo ka duulayna arimahaas oo dhan, waxaanu cambaarayn dusha kaga tuuraynaa dadka sida khaldan uga faa,iidaysanay dhacdadan, kuwaas oo abuuraya dhibaato aan ka dhex jirin labada shacab ee walaalaha ah.
Waxaanu u sheegayna dadweynah reer Puntland, in ayna dhag jalaq u siin dadka abuuray dhibaatooyinka, isla markaasna ay ogaadaan in dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo kuwa Puntland ay yihiin dad walaalo ah, wax alaale wixii xurguf ah ee soo kala dhex gashana lagu dhameeyo wada hadal iyo is faham.
Waxaanaan marna raali ka ahaan doonin wax alaale wixii abuuri kara dhibaato ka dhex dhacda labada shacab, waxaa kale oo aan canaan u soo jeedinaynaa dadka ma kasta ah ee afuufaya wararka beenta ah.